त्यसो त काठमाण्डौ पहिला पनि खुल्ला वा स्वच्छ सास मिल्ने सहर भने थिएन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसमा पनि सुविधा, सुरक्षा वा सहुलियत केही नभए पनि यहाँ ओइरिने जनघनत्वमा खासै कमी नआएको र दिनदिनै बन्दै गरेका भीमकाय विशाल भवनहरूले काठमाण्डौलाई झनै गाँज्दै लगेको छ । कुनै वेला भानुभक्तले ‘अमरावती’ को संज्ञा दिएका हाम्रो राजधानी अहिले धूलो, मैलो र फोहरले मात्रै हैन्, अनियन्त्रित र बेढंगले बनाइएका संरचनाहरूका कारण झन् झन कुरूप हुँदै गइ रहेको छ ।
केही हप्ता यता कामको सिलसिलामा तीन सहर घुम्ने क्रममा १-२ वटा अग्ला भवनहरू माथि उक्लेर हेर्दा यो सहरको रूप ‘बिरूप’ भएको झन प्रस्ट भयो । आजको पोस्टमा यही अमरावती बाट अधोगती तर्फ लम्केको काठमाण्डौका केही कंक्रिट जङ्गलका तस्विरहरू:
(फोटोलाई ठूलो पारेर हेर्न कुनैपनि फोटोमा क्लिक गर्नुहोला। फोटो स्वत: ठूलो आकारमा अर्कै पेजमा खुल्नेछ )
(कुरूपता माथि नयाँ दाह्रा र नङ्ग्रा--डिल्लीबजार कालिकास्थान तर्फको एक दृश्य)
(हावा समेत छिर्न मुस्किल होला जस्ता संरचनाहरू—डिल्लीबजार छेउको अर्को कोण)
(कंक्रिटको घना जङ्गल—स्वयम्भु माथिबाट देखिने एक दृश्य)
(खाली ठाउँ त कहाँ छ र ? – एकान्तकुनाबाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ)
(थाहा छैन यो सहरले कसरी सास फेर्छ—स्वयंम्भु माथीबाट देखिने तुवाँलोले ढाकेको दृश्य)
(यो पनि खाली ठाउँ भने हैन है … एयरपोर्ट माथिबाट पश्चिमतर्फको विस्तार हुँदैको जङ्गल)
(यो खुल्ला क्षेत्र पनि कत्ति नै टिक्ला र—फैलिदैँ आएको विस्तारले अतिक्रमित धोवीखोला छेउ)
कहिँ घर्घर ज्यवल मेसिनको
कहिँ चिरबिर गान् रसिला चरिको
अब त ठुला ठुला भवन गड्दछन् फाँटभरि
अलका पुरी कान्तिपुरी नगरी !!!!.....>>>भैरब आर्याल
ब्यापक शहरीकरण हुदै छ। पुर्वाधारहरु सहित ब्यबस्थित गराउन सक्नु पर्छ कसैगरि नत्र बिना योजना र सुबिधा बिना यस्तै तरिकाले बढ्ने हो भने बस्न निकै गाह्रो हुने छ यो जंगलमा। फोटोहरु सहि कोण मिलाएर लिनु भएछ यसपाली पनि..
काठमाण्डौंको रोगलाई राम्ररी नियाल्न सक्नेगरी तस्बीरहरु लिनुभएको रहेछ। काठमाण्डौं वास्तवमै एउटा कुरुप शहर बनेको छ।